Musqusha Qolka Golaha Wasiirada
Bogga ugu weyn / blog / Musqusha Jabbaan, Towladda tuwaalka ayaa khafiifsan ilaa 10 sentimitir, si habeysan ayaa loo dhigaa
2021 / 01 / 16 Qoondayntablog 6298 0
Iskuulka Ganacsiga Musqusha 2020-11-15
Qaybta musqusha ma weyna, sida loo sameeyo keydinta ayaa macquul ah marka la qurxinayo? Ma dooneysaa inaad rakibto gole wasiiro oo aad ka walwasho qabsashada aag. Laakiin dhalooyinkaas iyo dhalooyinkaas iyo tuwaalladaas, xaggee la dhigayaa?
Waxa ugu fiican ayaa ah in aan haysto saaxiib wax ku bartay Japan laba sano ka hor, waxay ii sheegtay in qodobkan gabi ahaanba loo gudbin karo naqshada musqusha ee reer Japan. Ku rakib 10 cm shukumaan aad u khafiif ah, lakabyada sare iyo hoose ee keydinta waxqabadka badan, wax ku oolnimada ayaa aad u xoog badan!
Maxay musqulaha Jabbaan u jecel yihiin qaabkan?
▼Ha Qabsan Goob Ku habboon Musqulaha Yaryar
Kabadhka tuwaalka noocan oo kale ah, guud ahaan qoto dheer ee kaliya 10 sentimitir dhuuban. Hadday tani ku duuban tahay derbiga, ama derbiga furan, ma saameyn doonto howlaha caadiga ah ee booska musqusha!
▼Kaydinta Xoog badan
Kani waa kabadh khafiif ah, keydinta tobanaan shukumaanno dhibaato maahan! Lakabyada kaydinta ee sare, dhexe iyo hoose. Bartamaha albaabka golaha waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo keydinta xiran, kore waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qormooyin. Waxyaabaha soo socda ayaa si toos ah loogulaabi karaa albaabka armaajo ee shelf, oo loo isticmaali jiray in lagu beddelo dharka. Qeybtuna waa barxad shukumaan meerto ah, balakoon malahan. Tuwaallo qoyan ayaa si toos ah loogu qallajin karaa armaajo tuwaalkan, waa sidee xariif!
Waa la keydin karaa, waa la dhigi karaa, waa la qalajin karaa, yaa aan jeclayn golaha wasiirrada ah ee noocan oo kale ah?
▼Kala Sooca iyo Qoyan
Tani waa sababta oo ah qaabka kaydinta lakabyada, golaha wasiirada si toos ah dhulka looguma dhejin. Booska tuwaalka lagu qalajiyo hoostiisa si toos ah ayaa loo beddelayaa, markaa gabi ahaanba ma jiraan musqusha meel dhimatay. Wixii qoyaan iyo qalalan golaha wasiirada, sidoo kale uma baahnid inaad ka walwasho qoyaanka iyo caaryada, nolosha adeegga dheer.
Sidoo kale meesha ay ku yaalliin kabadhka shukumaanku si caadi ah ayaa loo diyaarin karaa: oo la dhigayaa dhinaca saxanka. Markaad dhaqaysid, way kugu habboon tahay inaad qaadatid oo aad dhigatid shukumaanno. Sidoo kale waxaa lagu dhejin karaa darbiga dhinaca ilaa qubeyska, dharka beddelkiisa, ha ka welwelin inaad qoyan tahay!
Isla markii aan maqlay waxa uu saaxiibkay yidhi, waan sugi kari waayey in aan sayidkayga ka codsado in uu guriga aado oo dib u rakibo. Meel kaydi, keyd xoog leh. Tani waxay gabi ahaanba ku habboon tahay musqusha yar ee 3 mitir murabac ah, layaabna ma leh in qof kastaa ku ammaano keydinta qurxinta ee musqusha Japan. Laakiin waxaa jira meelo aad u tiro badan oo aan wax ku baran karo, ugu dambayntiina saaxiibkay wuxuu kaloo la wadaagay 2 naqshad qolka musqusha ee Japan, sidoo kale waxaan go'aansaday inaan gurigeyga u qurxiyo si waafaqsan ↓
Faahfaahinta Koowaad: Ku rakib Baabur Gacmeed Qolka Musqusha ah
Marka markaad ka kacdo fadhiga musqusha muddo dheer, waxaad heli kartaa meel aad ka caawiso. Gaar ahaan waayeelka dhibku ka haysto dhaqaaqa. Markay dhinaca musqusha leedahay gacan-qabsi, aad u ammaan badan oo dadnimo leh!
Faahfaahinta Labaad: Ku fidiso jiifka qeybta musqusha
Kordhi dusha shelf, oo kala bixi meesha si aad u kordhiso dareenka guud ee qolka, oo loo isticmaalo in lagu dhejiyo tuwaal waraaqo ah, taleefannada gacanta. Tani ma noqon karto mid ku habboon.
Faahfaahinta 3: Ku rakib Barxad Bixinno ah oo leh Hookyo dhinaca Skin
Dawada ilkaha iyo waxyaabaha kale ee lagu nadiifiyo si gooni ah ayaa loo laalaadin doonaa. Kala qoyan oo qalalan, yaree taranka bakteeriyada, laakiin sidoo kale siidaynta booska weelka lagu dhaqo!
Hore:: Xitaa Haddii Musqusha uu kayaryahay 5 mitir oo laba jibbaaran, Qayb Qoyan iyo Qallalan Maaha Wax Adag Inaan Iga Adkaan! Next: Faallooyinka qasabadda Delta jikada: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee qasabadaha Delta jikada
2021 / 01 / 15 6200
2021 / 01 / 11 6868